Kugarisana Kwevana Vemumhuri Imwe: Nei Vachifanira Kuwirirana? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Vanowirirana asi vachimbotosvorana”
Zvikonzero zviviri zvekuti uite kuti pave nerugare
Vana vemumhuri imwe chete “ndivo vanhu vanowirirana asi vachimbotosvorana.” Unonzwa kuti unovada, asi dzimwe nguva munomboita semusingapindirani. Mumwe musikana ane makore 18 anonzi Helena anoti, “Kahanzvadzi kangu kanombondibhowa, kanoita zvinhu zvakanonyatsoziva kuti zvinondisvota!”
Zvimwe zvinhu zvinoita kuti vana vemumhuri imwe chete vatadze kuwirirana zvinogona kugadziriswa nekungotaurirana uye kunzwisisana. Semuenzaniso:
Mukoma nemunin’ina avo vanenge vachishandisa bhedhurumu imwe chete vanogona kutadza kuwirirana pakuti mumwe anenge achida kuva pake ega kana kuti kuita zvinhu zvake pasina anomuvhiringidza. Ungagadzirisa sei dambudziko racho? Dzidza kuita zvakanakirawo mumwe, uchimupa mukana wekuita zvinhu zvake usingamuvhiringidzi. Ita zvinotaurwa neBhaibheri pana Ruka 6:31.
Sisi vangapfeka hembe dzemunin’ina wavo vasina kukumbira, kana kuti munin’ina angapfeka dzasisi vake asina kukumbira. Ungagadzirisa sei dambudziko racho? Tauriranai, moronga zvine musoro zvichaita kuti mupedze dambudziko racho. Shandisa zvinotaurwa neBhaibheri pana 2 Timoti 2:​24.
Dzimwe nguva, kusawirirana kunoita vana vemumhuri imwe chete kunenge kwakakura uye kunogona kutova nemigumisiro inotyisa. Chimbofunga nezvemienzaniso miviri yemuBhaibheri:
Miriyemu naAroni vakaitira Mosesi shanje, zvikazova nemigumisiro isina kunaka. Verenga nyaya yacho pana Numeri 12:1-15. Kana wapedza, zvibvunze kuti: ‘Zvii zvandingaita kuti ndisaitira mwana wemumba medu shanje?’
Hasha dzaKaini dzakaita kuti asvike pakuuraya munin’ina wake Abheri. Verenga nyaya yacho pana Genesisi 4:​1-​12. Kana wapedza, zvibvunze kuti: ‘Ndingadzora sei hasha dzangu kana ndagumburwa nemunin’ina, mukoma kana kuti hanzvadzi yangu?’
Pasinei nekuti zvingakuomera sei kuti uwirirane nevamwe vana vemumhuri menyu, pane zvikonzero zvinenge zviviri zvazvakanakira kuti uedze kuwirirana navo.
Zvinoratidza kuti wakura mupfungwa. “Ndaikurumidza kutsamwa kana ndangogumburwa netuhanzvadzi twangu twuviri,” anodaro mumwe mukomana anonzi Alex. “Iye zvino ndati dzikamei uye handichakurumidzi kuvagumbukira. Zvinongoratidzawo kuti ndakura.”
Bhaibheri rinoti: “Munhu anononoka kutsamwa ane ungwaru kwazvo, asi asingashiviriri anokwidziridza upenzi.”​—Zvirevo 14:29.
Zvinozokubatsira mune ramangwana. Kana uchikurumidza kugumburwa nezvinoitwa nevana vemumhuri menyu, ungazokwanisa sei kugarisana nemunhu waunenge waroorana naye, waunoshanda naye, waunoshandira, kana kuti mumwewo munhu waunofanira kuita zvinhu pamwe chete naye?
Chokwadi ndechekuti: Kuti uzogarisana nevamwe zvakanaka mune ramangwana zvinobva pakuti unonzwisisa vamwe zvakadini uye kuti unotaurirana navo zvakadini, uye hapana kumwe kwaungazvidzidzira kunopfuura mumhuri menyu.
Bhaibheri rinoti: “Nepamunogona napo, ivai norugare.”​—VaRoma 12:18.
Ungada rubatsiro here panyaya yekugadzirisa matambudziko nevana vemumhuri menyu? Verenga “Zvinotaurwa nevezera rako,” wozotarisa pepa rinoenderana nenyaya iyi rakanzi, “Kuwirirana Nevana Vemumhuri Medu.”
“Ndina vanasisi vangu 3, uye kutaura chokwadi hazvisi nyore nguva dzese kuita kuti tigare tichiwirirana. Asiwo, ndakatozoona kuti ndovanhu vanonyatsondiziva, vacharamba varipo kuti vandibatsire.”​—Jessica.
“Pane nguva dzandinomboita zvinhu zvinosvota mukoma wangu kana kuti iye anombonditsikawo konzi. Asi ndinomuda. Ndiye anotoita kuti ndive nechivimbo chekuitawo zvimwe zvinhu. Ndinoyemura chido chaainacho​—haamboregi kundibatsira, pamwe pacho anotondiitira zvandinenge ndisiri kumbotarisira.”​—Tyler.
“Ndinofarira kugara ndiri pane vamwe, saka ndinofara kuti ndine tuhanzvadzi twangu 2. Sezvo vari vakomana, kugara navo kuri kundibatsira chaizvo kuti ndizive kuti ndingagarisanawo sei nevanhu vasina kuita seni. Chikomborero chaicho kuva nehanzvadzi dzakadaro.”​—Cameo.
Kuwirirana Nevana Vemumba Medu